Yiziphi Izindlela Zokukhangisa Ezisebenza Ngokuphumelelayo? | Martech Zone
NgoLwesine, Novemba 9, 2017 NgoMsombuluko, Januwari 18, 2021 Douglas Karr
UBrian Wallace wabelane nge Umlando, i-Evolution, nekusasa lokumaketha okuthonya lokho kwenze umsebenzi omuhle wokuchaza umthelela nokuthi ama-brand asebenzisana kanjani nawo. Bengikhuluma ngokukhululeka mayelana nokuthi ama-brand asebenza kanjani nabashukumisayo futhi okuphambene nalokho futhi ngikholwa ukuthi le infographic evela ku-MDG Advertising yenza umsebenzi ohlukile ekuchazeni ukuthi ubudlelwano bokukhangisa obunempumelelo bubukeka kanjani.
I-infographic, I-State of Influencer Marketing: Okudingwa Yiwo Wonke Umkhiqizo, ixoxa ngamasu nezindlela eziphumelela kakhulu zokuthonya ukumaketha.
Amaqhinga Okumaketha Asebenza Kakhulu Asebenzayo
https://martech.zone/neverbounce-referralAmanxusa aqhubekayo - njengamanje, nginenxusa eliqhubekayo ne I-Agorapulse. Kungaba obunye bobudlelwano obuhle kakhulu engake ngaba nabo nomkhiqizo. Ngaqhubeka nobudlelwano no-Agorapulse ngemuva kokuthi ngangikhungathekile ngamanye amapulatifomu ezokuxhumana lapho ngiphatha inqwaba yama-akhawunti ezokuxhumana. Isixhumi esibonakalayo somsebenzisi sisebenza kakhulu njengohlu lomsebenzi noma ibhokisi lokungenayo, lapho amaqembu akho angaphatha kalula ukuxhumana kwangaphandle. Ukuhlanganiswa kokufinyelela kwami ​​nothando lwami ngomkhiqizo wabo kwavula umnyango lapho u-Emeric nethimba lakhe bangisayinela uhlelo lweNxusa. Ngaphandle kwengcindezi, nokudalulwa okugcwele, ngikhuluma nge-Agorapulse lapho abantu befuna ipulatifomu yokuphatha imithombo yezokuxhumana yabo.
Ukubuyekezwa Komkhiqizo - UShure ungithumelele i I-MV88 umbhobho we-iPhone yami cishe unyaka owedlule ukuze uyihlole. Ukulindela ukuthi bengizokwabelana ngokubuyekezwa kwami ​​ku-inthanethi bese ngibuyisa imakrofoni. UShure ubone ukuthi banomkhiqizo omuhle futhi bafuna ukumaketha nge-podcasters abanethonya. Yebo, ngawuthanda kakhulu umbhobho kangangokuthi ngiyaqhubeka nokuwukhombisa wonke umuntu… futhi ngacela uShure ukuthi ngingakwazi yini ukuwugcina.
Ama-Brand Mentions - Ungaze unqande yinkampani esiza amabhizinisi ukugcina imininingwane yawo ye-imeyili icacile ngamakheli anezinkinga angathikameza amandla abo okungena kubhokisi lokungenayo lababhalisile. Nginendatshana ethi, Kungani, kanjani, nokuthi Ungakuqinisekisa Kanjani Uhlu Lwe-imeyili Lakho Lokumaketha ku-inthanethi, olufundwa ngokungaguquguquki ngabafundi ngenhloso yokufuna izixazululo ezinjengalezi ukuze i-Neverbounce ifinyelele. Ngemuva kokuhlola ipulatifomu yabo nabanye, ngangazi ukuthi banomkhiqizo omuhle kunabo bonke lapho, ngakho-ke ngamukela isicelo sokukhombisa ngokusobala insizakalo yabo kulokho okuthunyelwe. Futhi, nathi sikhombisa ukudalulwa okugcwele.
Ukutholakala Komcimbi - Ngokushicilelwa kwethu kanye nesitudiyo sethu esiphathwayo, ngivame ukucelwa ukuthi ngihlanganise imicimbi ngenhloso yokukhokha, ukuhamba, nezindleko emicimbini. Emcimbini, sishicilela izindatshana, siqopha ama-podcast, senze izikhathi ze-Facebook Live, bese sibhala bukhoma imicimbi ku-tweet Ngize ngilethe nabasebenzi ukuthi benze izincwajana ezigqamile ezizothunyelwa ekhaya nababekhona ngemuva kwemicimbi. Muva nje, ngikwenzele iDell World lapho ngihlanganyele noMark Schaefer kwi-Luminaries podcast yabo. Umcimbi nethuba elimangalisayo. Ngaphandle kokuba phezulu esiteji, le yindlela engiyithandayo yokuthola ingqungquthela!
Okuqukethwe okuxhasiwe - Ngenkathi ngingenandaba nokuqukethwe okuxhasiwe, ngikhetha kakhulu ngezinkampani ezinomlingani naye. Kufanele babe ngabaholi esigabeni sabo semakethe futhi banikeze ukubaluleka kubafundi bethu, abalaleli, nabalandeli. Uma kubeka umkhiqizo wami engcupheni, ngeke ngikwenze. Ngiguqule ithani lezinkampani eminyakeni edlule ngoba angikwazanga ukufakazela inkampani noma umkhiqizo. Imvamisa uzothola okuqukethwe okuxhasiwe ngendlela ye imicimbi yokumaketha esabelana ngayo.
Abathengisi bathi okuqukethwe okuphumelela kakhulu kuvela kubantu abanokwethenjelwa, abanolwazi. Vele ngiyavumelana nalokhu. Ngikholwa ukuthi abagqugquzeli abathembekile, abanolwazi basebenzise iminyaka, mhlawumbe amashumi eminyaka, bakhe igunya labo embonini yabo. Ngokutshalwa kwemali okunjalo, bebengeke nje bazikhandle ukuze bathengise abathengi abaphezulu kakhulu. Nginesiqiniseko sokuthi ngingaphindeka kabili noma kathathu imali engenayo enginayo yokuthengisa, kepha ngeke nje ngikwenze ngenxa yokulahlekelwa yinhlonipho ngabafundi bami. Lokho engikukhokhelwa ngumkhiqizo akuqhathanisi nomzamo ongithathele wona wokwakha ukuthembeka kwami, futhi ngeke ngikufake engcupheni.
I-State of Influencer Marketing: Okufanele Ukwazi Ngebhrendi
Tags: ukumaketha kwamathonyaukuthonya ukumaketha infographicinfographicmdg ukukhangisamdgokubeisimo sokukhangisa okunomthelela
Abantu Ngempela Kufanele Baziphathe Ngcono Kwezokuxhumana